နှင်းတွေလို ဖြူဆွတ်တဲ့ အသားအရည်နဲ့ အရုပ်မလေးလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီးချောလေး သွန်းဆက်ကတော့ သူမချစ်ရတဲ့ အနုပညာကို အကောင်းဆုံး ကြိုးစားပြီး လုပ်နေသူလေးမို့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးခြင်းကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတာပါ။ လတ်တလောမှတော့ သွန်းဆက်က ထီမထိုးပဲ ထီပေါက်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးအကြောင်းကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ သွန်းဆက်တစ်ယောက် ကိုယ်တိုင်ထီမထိုးထားတာတောင် ဘယ်လိုကြောင့်များ ထီပေါက်ခဲ့လဲဆိုတာ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သွန်းဆက်ကတော့ ” ဘဝမှာ တော်ရုံထီ မထိုးခဲ့ဖူး… ထိုးခဲတယ်… ထိုးလဲပေါက်မှာမဟုတ်ဖူးရှုပ်တယ်ဆိုပီး မထိုးဖြစ်တာ😝😂 သွန်း- ဘန်ကောက်မှာရန်ကုန်ဖုန်းဝင်လာတယ်, ထီသည်ကောင်မလေး- မသွန်းဆက်လားမသိဖူးတဲ့, သွန်း- ဟုတ်ပါတယ်ရှင့်, ထီသည်- အမ ထီပေါက်လို့တဲ့, သွန်း- ရှင် 😳 အမ လူမှားနေပီထင်တယ်လို့ … ညီမဘယ်တုန်းကမှ ထီမထိုးထားဖူးလို့, ထီသည်- အမ ဒီနံပါတ် နဲ့ပေါက်နေတာတဲ့ တသိန်းဆိုလား( ဖုန်းလိုင်းကလဲသိပ်မကြည် / သိပ်မကြားရဖူး), သွနိး- ဟုတ် ( စဉ်းစား ငါဘယ်တုန်းက ထိုးလဲပေါ့), အမေ – သမီးထီပေါက်တယ်ဟုတ်လား, သွနိး- ဟုတ်အမေ – သမီးကိုလာစနေတာထင်တယ် / သမီးမှမထိုးတာပေါ့, အမေ – နင့်အဖေ လမ်းကြုံလို့မျက်စိရှေ့တွေ့လို့ထိုးလာပေးတယ်တဲ့ … နင့် နာမည်ရယ် / ပါးပါးနာမည်ရယ်/ အမေ့နာမည်ရယ် နဲ့ ( ၃ စောင်ထိုးလာပေးတယ်တဲ့) ဖုန်းနံပါတ်ပါ ၃ လုံးပေးခဲ့တယ်တဲ့ … သူကံစမ်းလာတာတဲ့ 😂😂😂, သွန်း – အယ်😳 ဆိုတော့ကား …. ငါလေး ကံကောင်းလာတယ်ကြည့်စမ်း🤩 ကိုယ်တိုင်တောင် မထိုးပဲပေါက်တယ်… ကိုယ်တိုင် ထိုးရင် သိန်း တသောင်း တောင် ပေါက်မလား မသိဖူးရယ် 😂 ကဲ .. နောက်ဆို ကံစမ်းမဲပုံးတွေလဲ နှိုက်တော့မယ်… ထီတွေရော အကုန်ထိုးတော့မယ်…. 😂😝🤩😇” ဆိုပြီး သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အံ့အားသင့်စွာ ရေးသားထားတာပါ။
အဖေရယ်၊ အမေရယ်၊ သွန်းဆက်ရယ် ၃စောင်ထိုးခဲ့တဲ့အထဲကမှ သူမရဲ့ထီက ပေါက်တာဆိုတော့ သွန်းဆက်တစ်ယောက် တော်တော်လေးကို ကံကောင်းတယ် ပြောရမှာပါနော်။
လတ်တလောမှာ ဘန်ကောက်သို့ ရောက်ရှိနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး သွန်းဆက်ကတော့ သူမချစ်ရတဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးစားပြီး အကောင်းဆုံးလုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ထီမထိုးပဲတောင် ထီပေါက်ခဲ့တဲ့ ကံကောင်းလွန်းသူလေး သွန်းဆက်ကိုချစ်ရင် Share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။